Chiito cheFrance: rondedzero, kurovedza muviri uye conjugation - UniProyecta
Kana paine chimwe chinhu chakaoma kudzidza mumitauro uye chinovengwa nevadzidzi, ndizvo conjugate verbs muchiFrench. Neraki, mumutauro wechizvarwa weFrance, izvo zvakakosha zvekubatanidza zvakaenzana kune vatinoshandisa muchiSpanish, neizvi tinoreva kuti zviito zvinoshandurwa zvinoenderana nenyaya inozviita uye neyakaitika (yapfuura, yazvino kana yemberi) mu izvo zvinoitika.
Mutauro wechiFrench une gumi nematanhatu ezviito zvenguva uzere uye zveizvi, zvishanu ndiwo anonyanya kushandiswa uye anosanganisira akawanda mamiriro. Nhasi tave kuzokupa nzira ina / nhanho kuti iwe ugone kubatanidza zviito zveFrench.
1 Fomu Nha. 1: Kumanikidzwa kweiyo conjugation
1.1 Kuumba zviito
1.2 Rangarira zvisazitasingwi
1.3 Ramba uchifunga mupfungwa dzakasiyana dzakasiyana dzinoshandiswa muchiito
1.4 Ziva izvo zvinonzi zviito zvenguva dzose (pane zvitatu zvacho)
1.5 Dzidza zvisina kujairika zviito
2 Fomu Nº 2: Conjugate chiito cheFrench mune yakapfuura yakapusa = passé composé
2.1 Shandisa yapfuura yakapusa yezviito zvakapera munguva yakapfuura
2.2 Conjugate chiito "avoir" mune ino
2.3 Tsvaga zvakapfuura kutora chikamu kwezviito
2.4 Kare = Joinha zvikamu zviviri
2.5 Zviito zvinoshandisa zviri panzvimbo pekuti zvive
2.6 Shandisa «être» panzvimbo ye «avoir»
3 Fomu Nha. 3: Kubatana kwezvazvino
3.1 Present = Tsika / Parizvino
3.2 Sangana iwo anopera muna "er"
3.3 Conjugate chiFrench zviito zvinopera mu "go"
3.4 Conjugate zviito zvinopera muna re
3.5 Dzidza conjugate kazhinji zvisina kujairika zviito
4 Fomu N 4: Kubatanidza zviito mune zvisina kukwana zvakapfuura nguva
4.1 Zviito zvakaitwa kwenguva yakati rebei
4.2 Tsvaga mudzi wezviito nekudzvinyirira ma "ons"
4.3 Batanidza magumo enguva isina kukwana yakapfuura kune mudzi
Fomu Nha. 1: Kumanikidzwa kweiyo conjugation
Rangarira kuti kubatanidzwa kwakafanana ne "kuumba" chiito zvinoenderana nezvidzidzo zvauri kureva, izvi zvinoitikawo muchiSpanish, semuenzaniso: tinogona kuti "vanosvetuka" asi zviri pachena kuti tinoshandura izwi rekuti "kusvetuka" kana munhu wacho kana kuti, iye anozviita ndiye "iwe". Kana tichienda kuFrench, kusangana kwacho kwakafanana: chidzidzo chega chega (isu, ivo, imi) chine kusangana kwakasiyana.
Izvo zvakakosha zvakanyanya kugadzirisa zviito zveFrance izvo rangarira kuti ndeei zvisazitasingwi zvinoshandiswa mumutauro uyu, iyo ine chimwe chirevo chekuwedzera kuSpanish.
Ini = heh.
Iye, iye, it = il, kana, zvichienda mberi.
Iwe = iwe.
Isu = Nous.
Ivo, Ivo = ils, ivo.
Iwe kana iwe = iwe.
Ramba uchifunga mupfungwa dzakasiyana dzakasiyana dzinoshandiswa muchiito
Kana izwi rechiito rakashaikwa kuenderana naro, rinozivikanwa se “risingaperi”. Mumutauro wechiSpanish, zviito zvakasiyana zvemazwi mu infinitives zvinopera muna ar, ir, uye er (semuenzaniso famba, mhanya, nezvimwewo). Mumutauro wechiFrench, infinitives ine zviito senge aller (kuenda) kana kupindura (kupindura). Chisingaperi chinoita chiito chigaro uye ndizvo zvinoshandurwa patinozvipa iyo conjugation yaunoda.
Ziva izvo zvinonzi zviito zvenguva dzose (pane zvitatu zvacho)
Mazhinji echiito muchiFrench anogona kukamurwa kuita mhando nhatu zvichienderana nekuguma kwechisingaperi chinoenderana nacho. Mhando yega yega inosanganisira mitemo yakati wandei yekubatanidza uye unofanirwa kuiziva kuti ubatanidze zviito zveFrench.
-Zviito zvinopera mu "enda": kwezviito zvakaita se "kuombera" (kuombera) uye "kupedzisa" (kupedzisa).
-Zviito zvinopera muna "re": zvinosanganisira zviito senge "nzwisisa" (teerera).
-Zviito zvinopedzisira muna "er": zvezviito zvakaita se "manger" (kudya) kana "parler" (kutaura).
Dzidza zvisina kujairika zviito
Sezvazviri mumitauro yese, uye chiFrench hachisi icho chakasarudzika, pane zviito zvakamira kushandisa mirau imwechete yekubatanidza sevamwe, mune izvi zvisaririra, mazhinji echiito chenguva akasiyana, saka pamazwi asina kujairika anowanzo tsvagirwa nguva yekubatana.
Isu tinokuratidza runyorwa uko iwe kwaunogona kuwana zvimwe zvinowanzoshandiswa zvisina kujairika zviito.
Ser = chinhu:
Unoda = Vouloir
Ita = Faire
Enda = Aller
Iva = Avoir
Isa, nzvimbo = Mettre
Fomu Nº 2: Conjugate chiito cheFrench mune yakapfuura yakapusa = passé composé
Shandisa yapfuura yakapusa yezviito zvakapera munguva yakapfuura
Iyo passé composé kana yakapfuura yakapusa inoshandiswa kune zviito umo kutanga uye kupera kwavo kwakasimbiswa, semuenzaniso "ndakanda penzura" kana "vakamhanya zvakanyanya". Kune zviito zvinowanzoitika munguva yakapfuura, senge mamiriro ekunze, chimwe chiito chenguva chinoshandiswa. Iyo yakapfuura yakapusa kana passé composé ndiyo yakajairika nguva yakapfuura mumutauro wechiFrench.
Conjugate chiito "avoir" mune ino
Kuti utange kubatanidza zviito muchiFrench kubva pane yakapfuura yapfuura, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yekupedzisira inoumba nguva yemubatanidzwa, ndiko kuti, inoumbwa nezvikamu zviviri. Chikamu chekutanga chinoumbwa kubva muchibatanidziro chechiito kuti uve (avoir), chinozadzisa basa rimwechete sechiito "kuva nacho" mumutauro wechiSpanish, semuenzaniso "Ndainaya" kana "Akasunga". Ngatikurangaridzei nezvechirevo chechiito "avoir":
Iva = Avoir = elles ont, tu as, j'ai, vous avez, il a, nous avons.
Tsvaga zvakapfuura kutora chikamu kwezviito
Kana tikaongorora chirevo "ndamhanya", uchaona kuti "mhanya" haifanane nechero conjugation yechiito "mhanya", izvi zvinoitikawo mumutauro wechiFrench, izvo zvinobatanidzwa zvezviito munguva yapfuura zvine nzira kupera zvakasiyana, uye chakanakisa chinhu ndechekuti ivo havana kunetseka kurangarira:
Vhesi dzinopera muna "er": "e" Semuenzaniso: montré
Maito anopera muna "enda": "ini" Muenzaniso: réussi
Mavhesi anoperera muna "re": "u" Semuenzaniso. ndanzwisisa
Kare = Joinha zvikamu zviviri
Izvo iwe zvaunofanirwa kuita izvozvi kubatana kubatana kwechirevo "avoir" nechakare chinotora chikamu uye semhedzisiro isu tichava nezwi rechiito munguva yakapfuura. Kana isu tiri kutaura nezve zvakaenzana, zvakaenzana zvekubatanidza muchiSpanish izvo zvatakaona mune yapfuura pfungwa zvingave "ndamhanya" kana "Vapfura", kunyangwe ichigona zvakare kududzirwa sekuti "Ndamhanya" kana "Vakapfura ". Mienzaniso:
Munhu wekutanga: "ai + chiito" ndakataura = J'ai parlé
Wechipiri munhu "se + chiito" Wapedza = Iwe saka fini
Wechitatu munhu "chiito" + Akanzwa = Il a compreu.
Chekutanga munhu muuzhinji "avons + chiito" Takabudirira = Nous avons réussi
Wechipiri munhu muuzhinji "avez + chiito" Wakaedza = Iwe une ave chinyorwa
Wechitatu munhu muuzhinji "ont + verb" Vakapindura = Elles ont répondu.
Zviito zvinoshandisa kuva panzvimbo yevair
Zvinenge zviito zvese muchiFrench zvinoshandisa fomula (avoir + yakapfuura kutora chikamu), kunyangwe kuti tigadzirise zvimwe zviito munguva yakapfuura yakapusa tinofanira kushandisa: sezviito munguva yakapfuura yapfuura (semuenzaniso: ndakawira). Zviito zvinotaurwa ndezvi:
zorora, iva, pasi, uya, dzoka, monter, enda, arriver, tomber, sortir, aller, naître, entrer, rentrer, retourner, muriro.
Aya maito anozivikanwa sezviito zvisina kufanira.
Shandisa «être» panzvimbo ye «avoir»
Tinofanirwa kuita izvi kubatanidza zviito muchiFrench izvo zvatakareva mudanho rekutanga. Kamwe patinodzidza izvo zviito zvinofanirwa kusangana ne «kuva»(" Kuve ") isu tinofanirwa kubatana navo kuchikamu chakapfuura kuti tivape kusangana kwavo munguva yakapfuura, ruzivo rwekuchengeta nderekuti chikamu chinofanira kunge chiri mukubatana nemunhu anoita chiito. Kune vakawanda zvidzidzo "s" inowedzerwa kumubatanidzwa uye kune vanhukadzi tsamba "e" inowedzerwa:
Munhu wekutanga (suis + chiito) Yo caí = (Muchiitiko chakataurwa munhu munhukadzi) I suis tombée
Wechipiri munhu (es + chiito) Iwe wakawa = Iwe uri tombé
Wechitatu munhu (est + chiito) Akawira = Il est tombé
Chekutanga munhu muuzhinji (sommes + chiito) Tikawa = Nous sommes tombés
Wechipiri munhu chizhinji (êtes + chiito) Iwe wakawa = Vous êtes tombés
Wechitatu munhu chizhinji (sont + chiito) Vakawira = Elles sont tombées
Fomu Nha. 3: Kubatana kwezvazvino
Present = Tsika / Parizvino
Iwe unofanirwa kushandisa izvo zviripo apo chiito chinoshandiswa nenzira yekujairira kana yazvino. Neraki, muchiFrench izvozvi zvinoshandiswa zvakafanana neSpanish, izwi rechiito iri rinoshandiswa kuturikira zvirevo zvakaita sekuti "Akawira muti." Mune zviito zvakasiyana, pane zvikamu zvitatu zvekutanga uye zvimwe zviito zvisina kujairika (zviito izvo zvisingashandisi mutemo wakajairika). Izvo zvakakosha zvikamu zvezviito ndeizvi:
Vhesi dzinoguma "enda"
Mavara anopera muna "re"
Vhesi dzinopera muna "er"
Sangana iwo anopera muna "er"
Tinofanira kubatanidza zviito muchiFrench zvinopedzisira muna “er”, tichitsiva magumo acho neimwe; chimwe nechimwe chezvisazitasingwi (iye, isu, ini, nezvimwewo) chine magumo akasiyana ayo "er" anofanira kugadziriswa. Mhedzisiro ndeiyi: e, e, es, ons, ez, ent. Semuenzaniso isu tinoshandisa chiito "parler" (kutaura):
Munhu wekutanga "e" Ndinotaura = Je parle
Munhu wechipiri "ndiye" Iwe unotaura = Iwe unotaura
Wechitatu munhu "e" Anotaura = Il parle
Wekutanga munhu muuzhinji "ons" Tinotaura = Nous parlons
Wechipiri munhu muuzhinji "ez" Iwe unotaura = Iwe parlez
Wechitatu munhu muuzhinji "ent" Vanotaura = Elles parlent
Conjugate chiFrench zviito zvinopera mu "go"
Tsiva zviito izvi neimwe mhedziso, izvi zvinoitwa nekuchichinja zvinoenderana nechisazitasingwi.
Misoro, kuburitsa, ndizvo, ndizvo. Ngatishandisei conjugation yekuombera ("kuombera") semuenzaniso wechiitiko ichi:
Munhu wekutanga "ndi" Ini ndinoombera -> J'applaudis.
Wechipiri munhu "ndiye" Unoombera -> Tu rumbidza
Wechitatu munhu "it" Anorova -> Il kuombera
Chekutanga munhu muuzhinji "maisons" Isu tinoombera ->Nous kuombera maoko
Wechipiri munhu muuzhinji "issez" Iwe rova ​​-> Unoda kuombera
Wechitatu munhu muuzhinji "issent" Ivo vanoombera -> Ils inorumbidza,
Conjugate zviito zvinopera muna re
Mune ino kesi isu tichaisa zvakare iwo magumo neimwe, isu tinofanirwa kusimbisa kuti aya haanyanyoitika zviito zvenguva dzose, asi zvakakosha kuti iwe uzive kuzvisanganisa zvakafanana. Iwo magumo ekuchinja anozove: hapana, ons, ez, ent, s uye s. Kubatana kwemunhu wechitatu, ndiko kuti iye kana iye, hakuna kubatana. Semuenzaniso isu tinotora chiito kupindura (répondre):
Munhu wekutanga "s" ini ndinopindura -> Je kupindura
Wechipiri munhu "s" Iwe pindura -> Mhinduro dzako
Wechitatu munhu "hapana" Anopindura -> I répond
Wekutanga munhu muuzhinji "ons" Tinopindura -> Nous repldons
Wechipiri munhu muuzhinji "ez" Unopindura -> Iwe pindura
Wechitatu munhu muuzhinji "ent" Vanopindura -> Elles rondedzero
Dzidza conjugate kazhinji zvisina kujairika zviito
Unogona kuziva kuti zviito zvisina kujairika zvakati wandei, asi tinodemba kukuudza kuti zvakafanira kuziva mabatirwo azvo, pazasi tichakupa mienzaniso mishoma, yasara yaunogona kutsvaga nekuisa "chiito + kubatanidza muchiFrench ”muGoogle.
Iva = avoir = Nous avons, J'ai, vous avez, il a, elles ont, tu as
Ir = Aller = chete vas, il va, vous allez, elles vont, nous allons, je vais
Fomu N 4: Kubatanidza zviito mune zvisina kukwana zvakapfuura nguva
Zviito zvakaitwa kwenguva yakati rebei
Izvo zvakakosha kuti uzive izvozvo kusakwana kwakapfuura kunoshandiswa kune zviito zvinoitika kwenguva yakati. MuSpanish musoro uyu wakafanana, iyo inonzi nguva inoshandiswa pazviito zvakaitika munguva yakapfuura asi kwete pane imwe nguva (Ex: "Ndakatamba basketball pandaive nemakore gumi nemashanu ekuberekwa" kana "Vakakumbira pizza mazuva ese", mune iyi mienzaniso unogona kunge uchinongedzera kune dzimwe dzese nguva dzavairaira pizza kana kutamba basketball)
Iri izwi rechiito rinofanira kushandiswa semuenzaniso zviito zvakajairika kana zviito, zera, nguva yemamiriro ekunze, nyika dzinoti kuve, zadza dhata kana manzwiro akasiyana.
Iyo yakapfuura nguva yemberi inoshandiswa kune mamiriro ezvinhu anoitika murungano ("Ndakatsvaira mugwagwa") uye iyo isina kukwana yakapfuura nguva inoshandiswa kuzadza data ("Ini ndaive nemakore gumi nemashanu ekuberekwa", "Kwaive nemakore")
Tsvaga mudzi wezviito nekudzvinyirira ma "ons"
Ichi rinoshandisirwa zviito zveFrench zvakaumbanidzwa mumunhu wekutanga muzvizhinji uye zvazvinoKuti uwane mudzi, unofanirwa kudzima magumo "ons", zvinoshandawo nezviito zvisina kujairika. Kana iwe uchida kutanga kubatanidza zviito zveFrench mune zvakapfuura zvisina kukwana, bvisa ma "ons" kubva pakubatana kwemunhu uye nguva yakataurwa pakutanga. Izvi zvinogona zvakare kushandiswa kana kutongwa mumutauro wechiSpanish, semuenzaniso mudzi wechiito uye uye ndi "uye" (ando, andas, andamos, anduviste). Mienzaniso:
Kupedzisa = finissons = finniss
Pane a kunze kwemutemo yatinotaura uye chiito «»Tre», kusangana kwayo mumunhu wekutanga muzvizhinji hakugumiri muna "ons" («isu sommes«). Mudzi wechiitiko ichi ndi "ét".
Batanidza magumo enguva isina kukwana yakapfuura kune mudzi
Tichaita izvi kuti tiwane kusangana muchiFrench, kusiyana nepassé composé kana yakapfuura yakapusa, yakapfuura isina kukwana inoitwa neshoko. Saka izvo zvatinofanirwa kuita kubatanidza magumo pamudzi. Semuenzaniso isu tichabatanidza chiito kudiridza (kutarisa):
Munhu wekutanga (ais) ndakatarisa = Heh irrdais
Wechipiri munhu (ais) Wakatarisa = Uchadiridza
Wechitatu munhu (ait) Aitaridzika = Il irrdait.
Munhu wekutanga muzvizhinji (ions) Takatarisa = Nous maonero
Wechipiri munhu muuzhinji (iez) Wakatarisa = Iwe unofarira
Chechitatu munhu muuzhinji (aient) Vakatarisa = Elles anonzwisa tsitsi
Parizvino dzidziso yedu yemashandisirwo echiito muchiFrench yasvika, tinotarisira kuti yakushandira, kunyangwe pasina munhu akati iri mutauro uri nyore, inyaya yekuidzidza nekuishandisa. Nhanho yakanaka nayo!
Ongorora: Kana kuverenga zvese zvichinetesa iwe, tinokusiira mamwe mavhidhiyo kuti iwe ugone kudzidza kudzamisa zviito mumutauro wechiFrench zviri nyore, kunyanya kudzidza ChiFrench chirevo:
Conjugate zvakajairika zviito muEER
kudzidziswa » Mitauro » French » Chiito cheFrance: rondedzero, kurovedza muviri uye conjugation